Sangana neAsheville Intern yedu, Alex! - Hinds Feet Farm
Sangana neAsheville Intern yedu, Alex!
Semunhu agara ari mumiriri wevanhu vakaremara, ndakakatyamadzwa kunzwa nezvenyaya yerecreational therapy pandakanyoresa kuWestern Carolina University. Mukati memesita yangu yekutanga paWCU, pandakagara mukirasi yeNheyo dzeRecreational Therapy, ndakaona kuti kurapa kwekutandara kwaive kwakanyanya kupfuura zvandaimbofungidzira. Ndakakurumidza kudzidza kuti RT inotora nzira yakazara yekusangana nezvinodiwa zvemuviri, zvekuziva, maitiro, manzwiro, uye zvemagariro evatengi vedu. Recreational therapists vanoshanda nevatengi vavo kutsvaga nzira nyowani dzekuzadzisa zvinangwa zvemunhu, kugadzira pfungwa yekudyidzana pakati pevarapi nevaya vanowana masevhisi. Kuve chikamu chendima inoshamisa iyi kwandipa mikana yakawanda yekuita izvo zvandinonyanya kuda-kushandira vanhu vakaremara uye nekupembera navo sezvavanozadzisa zvinangwa zvavo.
Ndichisvika mugore rangu repamusoro, mushure mekudzidza ins uye kunze kwekunakidzwa kwekurapa, huwandu hwevanhu vatinoshandira, uye nzira yekutsigira vatengi vedu zvakanyanya, yaive nguva yekutsvaga yakazara-nguva yekudzidzira semester yechirimo. Ndichiri kutsvaga internship, ndaiziva kuti ndaida kushanda nehuwandu hwevanhu vakasangana nemhedzisiro yeurocognitive disarray kana chiitiko chakafanana. Apo Branson, uyo zvino ava mutariri wangu, paakauya kuzogoverana nekirasi yedu yeRT nezvebasa rake paHinds' Feet Farm muAsheville, ndakabva ndaziva kuti ndaida kudzidza zvakawanda pamusoro penzvimbo iyi. Nguva pfupi yapfuura, ndakaronga bvunzurudzo, ichindipa mukana wekushanyira HFF uye kudzidza zvakawanda nezvehurongwa hwavo. Handina kungofarira chirongwa chacho chete, asi nhengo dzaive dzichigashira, uye zvaive nyore kuita sarudzo yekubvuma kudzidza paHinds' Feet Farm.
Kubva pazuva rekutanga rekudzidzira kwangu basa, ndakaona mamiriro akaita semhuri, uye rudo pakati penhengo, vashandi, nemhuri dziri pano. Uyezve, ndakatodzidza zvakawanda kupfuura zvandaitarisira. Sezvo ndakavaka hukama nenhengo, ndakanakidzwa nekudzidza nezvenzira dzakasiyana dzavakabva, kuti vakawana sei kukuvara kwepfungwa, uye kugadzirisa nematanho avakatora kuti vaenderere mberi kubva pakukuvara kwavo. Pamusoro pezvo, ndinodzidza zvakawanda zuva rega rega nezvehukama hwehunyanzvi, maitiro ekuongorora, kupindira kwekuronga, hunyanzvi hwehutungamiriri, mabasa ekutonga, nezvimwe zvakawanda. Parizvino, ndiri kuronga ndakazvimirira, kuita, kuongorora, nekunyora mapoka akati wandei pasvondo. Ndinonzwa kuti mikana yandakapihwa kusvika parizvino yakandigadzirira remangwana mundima yerecreational therapy.
Ndichapedza kudzidza muna Chivabvu neBS muRecreational Therapy. Zvirongwa zvangu zveramangwana zvinosanganisira kushanda chikamu chenguva seLRT / CTRS, sezvandinoenderera mberi nerwendo rwangu mumunda wehutano hwehutano. Ini nguva pfupi yadarika ndakagamuchirwa muchirongwa cheDoctor of Physical Therapy paWestern Carolina University, uye ndichatanga chirongwa ichi muna Nyamavhuvhu we2022. Ndinonzwa kuti kudzidza kwangu kwandifumura kune zvakati wandei zvekukuvadzwa kwehuropi izvo zvakabatsira mukunakidzwa kwangu nemuviri. ruzivo rwekurapa. Kunyange zvazvo nguva yangu paHinds’ Feet Farm ichakurumidza kupera, ndinovimba kuti munguva yemberi, ndinogona kudzorera kupurogiramu yakandipa zvakawanda kwazvo. Ndinotenda kushanda nesimba kwevashandi, nhengo, mhuri, kudyidzana, uye nharaunda kuchengetedza iyi HFF ichishanda, uye ndinotenda zvikuru nemukana wekuve chikamu chechirongwa chinopa mubayiro chakadaro. Hinds' Feet Farm inzvimbo yakakosha, uye inogara yakabata chidimbu chemoyo wangu.
Sangana neHuntersville Intern yedu, Maggie!
Sangana neAllied Health Intern yedu, Natalia!
Sangana neyedu Huntersville Day Chirongwa Intern, Lauren!
Mabhenefiti eOccupational and Recreational Therapy